Nhau - Jiafeng Kambani: RPET zvigadzirwa ichave iri tsika yekusimudzira kusimudzira kwezvinhu mune ramangwana.
Iye zvino zvave kukurumidza kuchengetedza nharaunda.Mazhinji maindasitiri anoona kukosha kwekupararira kwehukama uye kujoina muRPET uye kuita mupiro kupasi kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.RPET Jira (Rakashandiswazve PET Jira) inozivikanwawo sekokasi bhodhoro jira jira, iri Yakagadzirwa kubva kuMabhodhoro epurasitiki Akadzoreredzwa shinda yemachira machira erudzi nyowani rwegreen chengetedzo yezvakatipoteredza, yakadzika kabhoni sosi, yakagadzira pfungwa nyowani mumunda wekuvandudzwa.
Nechinangwa chekusimudzira kwakasimba, izvozvi zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza zvakashandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana pano: organic kana yakasikwa donje uye machira anozivikanwa kwese kwese, RPET zvinhu zviri munzira, nepo ichishandiswazve EVA kana yakadzokororwa TPU ichave maitiro matsva. Zvitsva zvinomera zvemicheka fiber senge chinanazi chemucheka uye jira rebhanana zviri kugadzirwa uye kushandiswa.
Jiafeng vanorumbidzwa kuti varambe vari mumweya we "kutendeseka, kuvimbika, kubatana pamwe nekubatsirana", asi vasingakuvadze nharaunda.
（Tyvek ruvara atla）
Jiafeng anogara achimanikidza kuti kushandiswa kwezvigadzirwa zvemamiriro ekunze ndiwo maitiro anobatsira epasi rese.Iyi bhegi reRPET haringosangana chete nezvinodiwa zvemamiriro ekunze uye zvemhando yepamusoro, asi zvinokodzera ruzhinji rwevanhu, zvinoshanda uye fashoni.
Jiafeng zvakare ane mamwe marudzi emabhegi ane akasiyana eco-hushamwari zvinhu.Sezvirimwa chirimwa, reclycable donje, bepa mashanga, Tyvek bepa, kraft bepa, biodegradable TPU uye nezvimwe zvese zvinhu zvinogona kushandura yemashiripiti uye yakasarudzika bhegi.
1, Pineapple rineni homwe
2, Reclycable donje bhegi
3, Paper mashanga bhegi
4, Tyvek bepa bhegi
5, Kraft bepa bhegi
6, Dzokorora EVA
7, Mamwe mabhegi eRPET
Zvichienzaniswa neyakajairwa PET polyester donje, RPET haingoratidzi chete chimiro chemiti yePET asi zvakanakira machira ekotoni.